निशाको छोटो ब्रेक ! ~ The Nepal Romania
हिरोइन निशा अधिकारी केही समय मोसन पिक्चस्रको 'ह्याङओभर'बाट टाढै रहन चाहन्छिन् । नत्र उनी सिनेमाको धपेडीमा यति व्यस्त थिइन् कि जतिबेला सुकै कामै-काम । 'फस्टलभ'को रिभ्यूले यी कलिउड दिभालाई व्यस्तताको भारी बोकाइदिएको थियो । अब केही समय उनी भिजेका रुपमा नजर आउँदैछिन् । उनका फिल्मी फ्यानहरुले अब निशालाई टीभी कार्यक्रम होस्ट गरिरहेको देख्न पाउनेछन् ।
'अफर त आइरहेका छन् तरपनि केही समय चलचित्र खेल्दिन' फस्टलभ हिरोइनले भनिन् 'तिहारसम्म अब टीभीतिरै ।' यद्यपी उनी सिनेमाबाट टाढिन लागेकी होइनन् । टीभीमा सिनेमाबारेको प्रोग्राम लिएर आउने जमर्कोमा छिन् उनी । अहिले विहानदेखि बेलुकासम्म प्रोग्राम सेटिङमा व्यस्त छिन् निशा । कस्तो प्रोग्राम हो ?'सरप्राइज दिने हो अहिले भन्दिँन ।' उनका फ्यानहरु आफ्नी प्रिय सेलिव्रेटीले कस्तो प्रोग्राम होस्ट गर्ने हुन् जान्न आतुर छन् । आफूमात्र होइन टीभीले नै भिन्न 'प्यार्टन'को कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दाबी निशा गर्छिन् । मिसन पैसा, नैना रेशम हुँदै फस्टलभ तय गरिसकेकी सुन्दरी हिरोइनले अपकमिङ प्रोजेक्टमा तिहारपछि काम गर्ने मुड बनाइसकेकी छिन् । भन्छिन् 'टाढिन लागेकी होइन झनै नजिकिन थालेकी हुँ ।'